पढनै पर्ने १०० नेपाली कितावहरु
Topic: पढनै पर्ने १०० नेपाली कितावहरु
Author Topic: पढनै पर्ने १०० नेपाली कितावहरु (Read 2321 times)
« on: February 05, 2018, 03:12:45 AM »
अनलाइन खवरले बनाएको लिष्ट हो
नेपाली इतिहास, समाज र परम्परासम्बन्धी धेरै पुस्तक विदेशी भाषामा र विदेशी लेखकले आफ्नै आँखाबाट लेखे । नेपालको राजनीति, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्था बुझाउन सक्ने धेरै पुस्तक लेखिएको रहेनछ भन्ने कुरा पुस्तकका लागि गरिएको सर्वेको नतिजाबाट देखिन्छ । नेपाली भाषामा नेपाल बुझ्न पढ्नैपर्ने ११ वटा पुस्तकको नाम हामीले संकलन गरेका छौं ।
Re: पढनै पर्ने १०० नेपाली कितावहरु
« Reply #1 on: February 05, 2018, 03:14:13 AM »
साहित्यमा रुचि हुने र नहुने दुवै खालका महिलाका लागि विज्ञहरुले निम्न ११ वटा पुस्तक सिफारिस गरेका छन् ।
« Reply #2 on: February 05, 2018, 03:14:46 AM »
२०७४ माघ २० गते २०:०१ मा प्रकाशित (२०७४ माघ २१ गते १५:५०मा अद्यावधिक गरिएको)
« Reply #3 on: February 08, 2018, 01:20:54 AM »
अनलाइनखबरले तीनवटा प्रश्नावली तयार पारेर नाम चलेका लेखक, कवि, पत्रकार, समीक्षक र पढन्तेका रुपमा चिनिएका केही पाठकसँग उहाँहरुलाई मन परेका नेपाली पुस्तकको नाम टिपाइदिन आग्रह गरेका थियो । उहाँहरुबाट टिपिएका नामलाई विश्लेषणात्मक विधिबाट नेपाली पाठकले पढ्नैपर्ने १११ वटा पुस्तकको नाम यहाँ सार्वजनिक गरेका छौं ।
यो सर्वेक्षणको नतिजालाई हामीले अन्तिम मानेका होइनौं । सयौं वर्षको नेपाली साहित्यको इतिहासमा लाखौं पुस्तक लेखिएका छन् । यो भीडमा १११ वटा मात्रै उत्कृष्ट पुस्तक छन् भन्ने आशय कदापि होइन । यीभन्दा राम्रा पुस्तकको नाम छुटेको हुन सक्छ । ती पुस्तकको नाम कारणसहित प्रतिक्रिया कोलममा थप्न लेखक-पाठक स्वतन्त्र हुनुहुन्छ ।
पंक्ति कारले जे सुनेको किताब छ,त्यै किताब पढ्नै पर्ने सुचीमा??दिएको सुचिमा हावादारी किताब पनि टन्नै छन, राम्रा किताबको नाम छुटाएको पनि छ, के झोला कथा संग्रह पढ्नै पर्ने किताब होइन,सगरमाथाको गहिराई नाप्नु पर्दैन ?
जिवन काँडा कि फुल, चिना हराएको मान्छे, सोच , बिनोद चौधरी को आत्मकथा पढ्नै पर्ने कृती हुन जस्तो चै मलाई लागेन ।
रवीन्द्र लेख्नुहुन्छ | २०७४ माघ २१ गते ६:४६
हा हा । अश्विनी कोइरालाले आफ्नो अनि आफ्नो भाइ अच्युतको किताब बिकाउनका लागी लिस्ट तयार पारेछन । अनि उनैले चिनेजानेका लेखकको, उनीसम्बद्ध बूकहिल प्रकाशनको । देवकोटा, शंकर लामिछाने, भूपी नअट्ने भर्खरका ठेट्ना अट्ने । स्वार्थी लिस्ट ।
शंकर लामिछाने,महाकवि देवकोटा, भूपी शेरचन हराएछन त..
अनि ऐना लेख्ने रामलाल अधिकारी, महेश विक्रमले “छापामारकि ‘छोरी'” पनि लेखेछन.. LOL
« Reply #4 on: February 08, 2018, 01:21:49 AM »
RD Kulung Nepali · Khandbari
हैट ! म अनपढ हाेला !
यहाँ सूचिकृत १११ मा १७ वटा पुरा पढेकाे रहेछु । त्यस्तै ७ वटा अलि अलि पढेकाे रहेछु । अनि केही पुस्तक किनेर नपढी राखेकाे पनि परेछ । विषयगत रूपमा हेर्दा
(१) नेपाल बुझ्न पढ्नै पर्ने ११ मा १ वटा पढेकाे र १ नपढी राखेकाे रहेछु । (२) अात्मकथा ११ वटामा ३ पढेकाे, १ किनेर राखेकाे रहेछ । (३) किशाेर/युवाले पढ्ने भनिएकाे ११ मध्ये कुनै पनि पढेकाे रहेनछु (तर नाम अधिकांशकाे थाहा भएाकाे) । (४) महिलाले पढ्नु पर्ने ११ वटामा ३ पढेकाे र १ नपढी राखेकाे रहेछु । (५) पढ्नै पर्ने भनिएकाे २१ वटामा ४ वटा पढेकाे र ३ वटा किनेर अाधा पढेकाे रहेछु । (६) कविताका ११ मध्ये २ वटा पुरै र ४ वटाकाे केहि कविता पढेकाे रहेछु । (७) कथाका ११ मध्ये १ वटा पढेकाे रहेछु । (८) नाटकका ५ कृतिमा पुरै कृति पढेकाे एउटा पनि रहेनछ । (९) संस्मरणका ५ कृतिमा १ वटा पढेकाे रहेछु । (१०) अनुदित ११ मा १ वटा पढेकाे रहेछु । र (११) विदेशीकाे दृष्टिमा नेपाल सम्बन्धि ३ मध्ये १ वटा पढेकाे रहेछु ।
याे दृष्टिमा म अनपढ ल्वाँठ नै देखिएँ । तर यसमा छानिएका कृतिहरूमा धेरै राम्रा र प्रभावशाली पुस्तकहरू : विशेषत : उत्प्रेरणात्मक र वस्तुवादी अध्यात्मिक कृतिहरू छुटेकाे देखियाे । अनुदितमा यसअघि अधिकांश बाैद्धिक भनिएकाहरूले लिने गरेका नामहरू छुटेकाे पाइयाे ।
जस्तै : अामा, यु क्यान विन, युवाहरूकाे गीत, विचार विज्ञान, विकासानन्दका पुस्तकहरू, डेल कार्नेगी र स्वेट मार्डेनका पुस्तकहरू र अरू पनि धेरै छन् । जाे पढ्नमा अानन्द र ज्ञानदिने छन् । अनि सबै धर्मका धर्म ग्रन्थहरू पढ्नै पर्ने पुस्तक हुन् (मैले नि पढेकाे छैन है !)
Feb 3, 2018 8:33am
« Reply #5 on: February 11, 2018, 07:42:11 AM »
पढनै पर्ने उपन्यासमा
- लुकेको समाज
- निलो चोली